‘युवाले दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकसँग दूरी राख्नुपर्छ’- मुटु शल्यचिकित्सक डा. भट्टराई « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
‘युवाले दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकसँग दूरी राख्नुपर्छ’- मुटु शल्यचिकित्सक डा. भट्टराई
२०७७, ४ भाद्र बिहीबार ११:१३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । मनमाहेन कार्डियोलोजी अस्पतालका मुटु शल्यचिकित्सक डा. अनिल भट्टराईले घरका युवाले सकेसम्म दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकसँग दूरी राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले घरमा कोही दीर्घरोगी भएमा सकेसम्म उहाँहरुलाई छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्न सल्लाह दिनुभयो ।
सबै नागरिकले स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउनुपर्नेमा डा। भट्टराईको जोड छ । भीडभाडमा सकेसम्म नजान र जानुपर्दा माक्स र सेनेटाइजरको प्रयोग गर्न उहाँले सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । लामो समयसम्म कार्यालयमा बस्ने र भीडमा जानुपर्नै पेशामा व्यक्तिले घर छिर्दा लुगा बाहिर खोल्ने र हातखुटा धोएर मात्रै भित्र पस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सबै सुरक्षाका उपाय अपनाउन सके मात्रै यसबाट अरुलाई रोग सार्नबाट बचाउन सकिन्छ ।” उहाँले घरमा बसिरहेकाले स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नुन र चिनिको मात्रा कम गरेर हरियो तरकारी र सागसब्जीको मात्राम बढाउनुपर्नै उहाँको सल्लाह छ । रासस